Zoma 11 Janoary 2019. – FJKM
Zoma 11 Janoary 2019.
2 Samoela 3.1-39
Nihanahery ny fanjakan’i Davida
1-Niteraka zanaka lahy tao Hebrona izy .
Enina no isan’izy ireo . Mpandova ny fanjakana ny zanakalahy.
2-Niala tamin’i Isboseta i Abnera
Mpitari-tafika i Abnera . Rehefa nisy nanafitohina azy tamin’i Isboseta , zanak’i Saoly natsangany ho mpanjaka dia nitamberina tao am-pony ny marina momba an’i Davida izay tokony ho mpanjaka araka ny Tompo . Noho izany niala izy .
3-Nifanaiky tamin’i Davida i Abnera . Ankoatra ny iraka nisava làlana dia andian’olona mafonja no tonga tao Hebrona notarihan’iAbnera mba hifanaiky amin’i Davida. Naverina tamin’ny laoniny ny taloha ka nomena an’i Davida indray i Mikala vadiny. Manana anjara toerana eo amin’ny fanjakana ny vehivavy.
4-Nosembanin’ny valifatin’i Joaba ny fikasan’i Abnera.
Tsy teo i Joaba ka tsy nahara-baovao . Nony tonga izy dia nahare. Nokianiny ny mpanjaka , ary nofitahiny i Abnera ka matiny. Antony : ho valifaty ny amin’i Asahela rahalahiny sady fiarovana ny toerany
5-Nidio noho ny fahafatesan’i Abnera i Davida
Endrika roa no nisehoan’izany. Andaniny ny fanambarany fa tsy tomponandraikitra na tompon-kevitra ny namonoana an’i Abnera izy . Ankilany ny fisaonana ny fisaonana nampanaoviny narahina vavaka fifadiankanina nataony dia nampahazava tamin’ny rehetra fa olo-madio izy amin’ny raharaha Abnera .